လေ့ကျင့်ခန်းကစိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုငြိမ်းအေးစေနိုင်ပုံ (၂၀၁၃) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
လေ့ကျင့်ခန်းတော့ပူပန် (2013) စိတ်အေးအေးထားပါနိုင်သလားဘယ်လို
ဇူလိုင်လ 3, 2013, 12: 01 နံနက်
ပြီးတော့သူတို့ကအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအတွက်မဖြစ်သင့်သည့်အခါသူတို့ကိုပိတ်ပစ် - သဘောသဘာဝရဲ့လိမ္မာပါးနပ်၏မျက်စိ-ဖွင့်လှစ်ဆန္ဒပြခုနှစ်, Princeton University ကသုတေသီတွေကမကြာသေးမီကစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းတက်ကြွအသစ်ကဦးနှောက်ဆဲလ်တွေဖန်တီးပေးကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အချို့သောအချိန်များအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းလေ့လာနေသိပ္ပံပညာရှင်များဦးနှောက်အပေါ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုရဲ့နှစ်ခုထင်ရသောသဟဇာတသက်ရောက်မှုအားဖြင့်စဉ်းစားရခက်ပါပြီ။ တဖကျတှငျလေ့ကျင့်ခန်းအသစ်နှင့်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဦးနှောက်ဆဲလ်များ၏ဖန်တီးမှုတောင်းလာမှလူသိများသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, လေ့ကျင့်ခန်းကဦးနှောက်၏အချို့အစိတ်အပိုင်းများတွင်အေးဆေးတည်ငြိမ်တစ်ခုခြုံငုံပုံစံသွေးဆောင်နိုင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အများစုဟာဖြစ်ကောင်းအာရုံခံအချို့သောဓာတ်နှင့်အတူမွေးဖွားဖြစ်ကြောင်းနားလည်သဘောပေါက်ကြပါဘူး။ တချို့ကမကြာခဏအငယ်သူတို့, သဘာဝအားဖြင့်အလွယ်တကူစိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကသငျသညျအတှေးအချေါနဲ့မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းရေးအရှိန်မြှရန်ဆန္ဒရှိလျှင် laudable ဖြစ်သောနီးပါးမဆိုဒေါသနှင့်အတူပစ်ခတ်။
သို့သော်အင်္ဂါရပ်နေ့စဉ်စိတ်ဖိစီးမှုကြိမ်အတွင်းလျော့နည်းနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးဖိအားဘဝ-သို့မဟုတ်သေခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ပါဝင်ပတ်သက်နေနှင့်ချက်ချင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရေးယူမလိုအပ်ပါဘူးဆိုရင်, ထို့နောက်တစ်ကြိမ်မှာအားလုံးပစ်ခတ်စိတ်လှုပ်ရှားအာရုံခံအများကြီးရှိခြင်းစိုးရိမ်စိတ် inducing, တန်ပြန်နိုင်ပါတယ်။
တိရစ္ဆာန်များအတွက်လေ့လာမှုများ, အထူးသဖြင့် hippocampus အတွက်, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းများစွာသောစိတ်လှုပ်ရှားအာရုံခံဖန်တီးတှေးအချေါနှငျ့စိတျပိုငျးဆိုငျရာတုံ့ပြန်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့လူသိများဦးနှောက်၏အဘို့ကိုပြသခဲ့ကြသည်။
ဘယ်လိုတစ်ခုလှုပ်ရှားမှုတစ်ပြိုင်နက်စိုးရိမ်ပူပန်များအတွက်စံပြအာရုံကြောအခြေအနေများဖန်တီးရန်နှင့်တစ်ဦးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအမြစ်တွယ်နေအေးဆေးနှင့်အတူယောဂီထွက်ခွာနိုင်, အ Princeton သုတေသီများအံ့ဩ?
ဒါကြောင့်သူတို့က, အရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်ကိုစုဝေးစေဦးနှောက်အတွက်မွေးကင်းစဆဲလ်ခြေတစ်လှမ်းတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာသူတို့နှင့်အတူထိုးသွင်းလျက်, အခြားသူများအား၎င်းတို့၏လှောင်အိမ်ထဲမှာတိတ်တဆိတ်ထိုင်နေစဉ်ခြောက်လပတ်, သူတို့ထဲကတစ်ဝက်ကိုနည်းနည်းဘီးပေါ်တွင်အလိုတော်မှာ run ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်။
အဲဒီနောက်သိပ္ပံပညာရှင်အုပ်စုတစ်ခုချင်းစီရဲ့အခြေခံကွောဆုံးဖြတ်သည်။ ပွင့်လင်းကောင်းစွာသက်ရောက်စေဒေသများနှင့်အတူအိတ်များအဖြစ်နေရာ၌ထောင့်မှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးထားသည့်အပြေးကြွက်, သူတို့ကပိုပြီးယုံကြည်မှုနှင့်အထိုင်များတိရိစ္ဆာန်များထက်လျော့နည်းစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသည့်အရိပ်အယောင်ကိုသတိထားပြီးပွင့်လင်းဒေသများရှိအချိန်စူးစမ်းခြင်းနှင့်သုံးဖြုန်းဖို့ပိုပြီးဆန္ဒရှိခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါသုတေသီများသည်လည်းမည်မျှနှင့်သူတို့ပါရှိသော neuron အသစ်တွေအဘယျအမျိုးပေါင်းဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့အပြေးသမားနှင့်အထိုင်များကြွက်တချို့၏ဦးနှောက်စစ်တယ်။
မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်း, အပြေးသမား '' ဦးနှောက်အများအပြားအသစ်စိတ်လှုပ်ရှားအာရုံခံနှင့်အတူ teemed ။ အဆိုပါအထိုင်များကြွက်တွေရဲ့ဦးနှောက်လည်းမဟုတ်ထိုကဲ့သို့သော profusion အတွက်ဆင်တူ, မတည်ငြိမ်သောမွေးကင်းစဆဲလ်ပါရှိသည်။
အဆိုပါအပြေးသမား '' ဦးနှောက်သို့သော်လည်းအထူးအလွယ်တကူပစ်ခတ်အခြားအာရုံခံစောင့်ရှောက်ခြင်း, ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်သော neurotransmitter ဂါဘမြို့သား, လွှတ်ပေးရန်ဒီဇိုင်း neuron အသစ်တွေ၏ထူးဆန်းသောအရေအတွက်ကရှိခဲ့ပါတယ်။ အကျိုးသက်ရောက်မှုခုနှစ်တွင်ဤဦးနှောက်ထဲမှာလှုပ်ရှားမှု shush နှင့်တိတ်ဆိတ်ဖို့ဒီဇိုင်းထိန်းအာရုံခံဖြစ်ကြသည်။
အဆိုပါအပြေးသမား '' ဦးနှောက်မှာတော့စိတ်ခံစားမှုရဲ့အပြောင်းအလဲနဲ့အတူဆက်စပ် hippocampus တစ်ဦးသောအဘို့ကိုတွင်ဤဆဲလ်၏ကြီးမားသောသစ်ကိုလူဦးရေ, အ ventral ဒေသရှိခဲ့သည်။ (ထို hippocampus ၏ကြွင်းသောသူတို့သည်, dorsal ဒေသ, စဉ်းစားတွေးခေါ်များနှင့်မှတ်ဥာဏ်ပိုမိုပါဝင်ပတ်သက်ဖြစ်ပါသည်။ )
အဘယ်အရာကိုအခန်းကဏ္ဍသည်ဤထိန်းအာရုံခံတိရစ္ဆာန် '' ဦးနှောက်ထဲမှာကစားခဲ့ကြခြင်းနှင့်နောက်ဆက်တွဲအပြုအမူကိုလုံးဝရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရပါဘူးဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒါကြောင့်လာမယ့်သိပ္ပံပညာရှင်ညင်ညင်သာသာငါးမိနစ်ရေခဲ-ရေအေးထဲမှာကနျြကြွက်တင်လိုက်တယ်။ ကြွက်ရေအေးကိုခံစားကြပါဘူး။ ဒါကြောင့်အသက်အန္တရာယ်မဖြစ်ပေမယ့်သူတို့ကနှစ်မြှုပ်ခြင်းစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိုးရိမ်သောက-inducing ရှာပါ။
ထိုအခါသိပ္ပံပညာရှင်များသည်ဤတိရိစ္ဆာန်များ '' ဦးနှောက်စစ်တယ်။ သူတို့ကမကြာသေးမီကပစ်ခတ်ထားပြီးတစ်ဦးအာရုံခံဆဲလျညွှန်ပြကြောင်းချက်ချင်းအစောပိုင်းမျိုးဗီဇအဖြစ်လူသိများအမှတ်အသားများ, ရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်။
သူတို့ဟာ profusion အတွက်သူတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နှစ်ဦးစလုံးဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုနှင့်အထိုင်များကြွက်တွေမှာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဆဲလ်၏ကြီးမားသောနံပါတ်များအအေးရေချိုးဖို့တုန့်ပြန်ပစ်ခတ်ခဲ့သည်။ စိတ်လှုပ်ရှားမှု, တိရစ္ဆာန်စိတ်ဖိစီးမှုများကဖွင့်ပစ်ခတ်ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဒါပေမယ့်အပြေးသမားတွေနဲ့ပြုလုပ်ကြာရှည်မခံခဲ့ပါ။ သူတို့ရဲ့ဦးနှောက်က, အထိုင်များတိရစ္ဆာန်များ၏ရှိသူများနှင့်မတူဘဲ, အ shushing အာရုံခံကိုလည်းစိတ်လှုပ်ရှားအာရုံခံ '' လှုပ်ရှားမှုအေးဆေး, ဂါဘမြို့သားဖြန့်ချိ, ကြီးမားတဲ့နံပါတ်များအတွက် activated ခဲ့ပြီးယူဆရပင်လယ်အော်မှာမလိုအပ်သောစိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုစောင့်ရှောက်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားပြသသည်။
အကျိုးသက်ရောက်မှုမှာအပြေးသမား '' ဦးနှောက်စိုးရိမ်ပြီး concomitant, ကျယ်ပြန်အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့အမြန်အလုအယက်နဲ့အအေးရေချိုး၏အတော်လေးအသေးစားစိတ်ဖိစီးမှုမှတုန့်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။
အဘယ်အရာကိုဒီအားလုံးအကြံပြုယခုအမျိုးသားစိတ်ကျန်းမာရေး၏ Institute မှ, နှင့်အခြားသူများမှာသူမ၏ဘွဲ့လွန်ကျောင်းသားတိမောသေ Schoenfeld နှင့်အတူစက္ကူရေးသားခဲ့သည်သူကိုဧလိရှဗက်သူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်, Princeton မှာသူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင် Lab မှဒါရိုက်တာ "ဟုဆိုပြေးသမား၏ hippocampus စှာဖြစ်ပါတယ် အထိုင်များတိရိစ္ဆာန်များ၏ထံမှကွဲပြားခြားနားသော။ အဲဒီမှာပိုပြီး excitatory အာရုံခံနှင့်ပိုပြီး excitatory synapses ဖြစ်ကြပေမယ့် inhibitory အာရုံခံစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်ထဲမှာ, excitatory အာရုံခံလြော့မရှိဟုယူဆရ, activated ဖြစ်လာဖို့ပိုများပါတယ်သာ။ "ဒီ တွေ့ရှိချက်များကိုအာရုံကြောသိပ္ပံများ၏ဂျာနယ်ထဲမှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်.
ဒီလေ့လာမှုကရေရှည်လေ့ကျင့်ရေးတုံ့ပြန်မှုဆန်းစစ်ကြောင်း, သူကထပ်ပြောသည်, မှတ်သားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ အဆိုပါအပြေးသမား '' ဘီးကိုသူတို့အအေးရေချိုးမတိုင်မီ 24 နာရီသော့ခတ်ခဲ့, ဒါသူတို့လေ့ကျင့်ခန်းထဲကနေအဘယ်သူမျှမစူးရှသောငြိမ်သက်အကျိုးသက်ရောက်မှုရရှိလိမ့်မယ်။ အဲဒီအစား, အပြေးသမားနှင့်အထိုင်များတိရိစ္ဆာန်များအကြားစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုအတွက်ကွာခြားချက်ဟာသူတို့ရဲ့ဦးနှောက်၏အခြေခံပြုပြင်ရောင်ပြန်ဟပ်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ကိုသိရအဖြစ်၏သင်တန်း, ကြွက်ယောက်ျားမိန်းမမရှိကြပေ။ သို့သော်ဒေါက်တာသူမ၏သုံးသပ်ချက်ထဲတွင်ပြောပါတယ်အခြားလေ့လာမှုများအလားတူပြုပြင်ထွက်အလုပ်လုပ်သောသူလူများ၏ဦးနှောက်ထဲမှာနေရာအရပ်ယူကြောင်းအကြံပြု "ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ခန်းလူသားများအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှုလျော့နည်းစေကြောင်းပြသ" ။
"ကျွန်မကကြီးမားလမ်းပိုင်းမဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်" ဟုသူမက "တက်ကြွသောလူများ၏ hippocampi အထိုင်များကလူတွေထက်စိတ်ဖိစီးမှုအချို့မလိုလားအပ်သောရှုထောင့်မှလျော့နည်းဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြုပါတယ်။ " နိဂုံးခြုပျ